» शिल्पा र राज कुन्द्राविरुद्ध मुद्दा दर्ता, के हो नयाँ मामिला ?
शिल्पा र राज कुन्द्राविरुद्ध मुद्दा दर्ता, के हो नयाँ मामिला ?
२८ कार्तिक २०७८, आईतवार १४:०१
बलिउड नायिका शिल्पा शेट्टी तथा उनका श्रीमान् राज कुन्द्राविरुद्ध मुम्बईको बान्द्रा पुलिस स्टेशनमा मुद्दा दर्ता भएको छ । नितिन बराई नामका व्यक्तिले शिल्पा र राजले सन् २०१४ देखि हालसम्म स्पा र जिम फ्रेन्चाइजी बाँड्ने नाममा थुप्रै पटक धोका दिएको आरोप लगाएका छन् । नितिनले यो मामिलामा काशिफ खान, दर्शित शाह र उनका केही साथीलाई पनि आरोपी बनाएका छन् । यद्यपि, काशिफ र दर्शित को हुन् र शिल्पा–राजको कम्पनीमा उनीहरुको के भूमिका छ त्यसबारे पत्ता लाग्न सकेको छैन ।